नपुंसक बलात्कारी - परिहास - नेपाल
बलात्कारका घटना अचाक्ली बढेपछि अब बलात्कारीलाई के सजाय दिने भन्ने बहस पनि सुरु भएको छ । धेरैको विचार के छ भने नेपालमा बलात्कारीलाई दिइने सजाय नै थोरै छ । यसलाई अलि बढाउनुपर्छ । कति बढाउने र कसरी बढाउने भन्नेबारे पनि धेरै सुझावहरु आएका छन् । तीमध्ये एउटा सुझाव हो, बलात्कारीलाई नपुंसक बनाउनुपर्छ । बलात्कारीलाई कुनै सजाय नदिने । सीधै लगेर नपुंसक बनाइदिने ।
सुझाव प्रगतिशील छ । तथापि एउटा प्रश्न छ, कुनै पुरुषलाई नपुंसक बनाउनेबित्तिकै उसले बलात्कार गर्न छाड्छ त ? नपुंसक बनाउनेबित्तिकै उसले बलात्कार गर्दैन भन्ने के ग्यारेन्टी छ ? यो कसैले लिन सक्ने ग्यारेन्टी होइन । किन सक्दैन भने यो बलात्कार भन्ने कुरा जो छ, त्यो वास्तवमा गर्ने नै ‘नपुंसक’ ले हो । जोसँग पुंसत्व छ, उसले बलात्कार गर्दैन । पुरुषमा जब पुंसत्व समाप्त हुन्छ, तब उसले बलात्कार गर्छ । अब बलात्कारी आफैँ नपुंसक छ भने त्यसलाई पुन: नपुंसक नै बनाएर के दण्डित गर्नु ? त्यो त उसका लागि कुनै दण्ड नै भएन ।
बरु एउटा कुराचाहिँ हो । देशको कुनै पनि ठाउँमा जब कुनै महिला बलात्कारको सिकार हुन्छिन्, तब सबैभन्दा पहिले नपुंसक बन्नेचाहिँ त्यहाँको प्रहरी रहेछ । सानो होस् वा ठूलो, कहीँकतै जब कुनै महिला बलात्कृत हुन्छिन्, तब नपुंसकताको पहिलो सिकार प्रहरी बन्छ । त्यसपछि त्यहाँको सुरक्षा प्रबन्ध पनि नपुंसक बन्न पुग्छ । अनि, पछि क्रमश: स्थानीय प्रशासन, कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिक पार्टी, पार्टीका नेता, समाजका ठूलाठालू आदिहरु पनि पालैपालो नपुंसक बन्दै जाने रहेछन् । समाजका यति धेरै तफ्वहरु जब एकमुष्ठ रुपमा नपुंसक बन्छन्, तब एउटा बलात्कारी नपुंसक बन्दैमा वा नबन्दैमा महिला सुरक्षित हुन सक्लान् र ?